Nezvedu - Shijiazhuang Sothink Trading Co., Ltd.
Shijiazhuang Sothink Trading Co, Ltd., yakavambwa muna 2011, ikambani yakasarudzika inovhara nzvimbo yezvigadzirwa zvehuswa hwekugadzira. Zvigadzirwa zvedu zvikuru ihwo huswa hwekuisira hweMamiriro ekunze uye nhabvu / nhabvu nhandare isu tinopawo zvimwe zvigadzirwa zvine chekuita nenzvimbo dzataurwa pamusoro, senge tepi yekubatana, LED mamabhodi, granules dzerabha, nezvimwe.
Seyese kambani inoburitsa kunze kwenyika, isu tinoshandawo nemhando dzakasiyana dzemidziyo uye zvekuvakisa, senge yakatenderera pombi uye mativi machubhu, aruminiyamu jira, PPGI / kwakakurudzira machira, waya pajira riya, zvipikiri, screws, simbi waya, nezvimwewo.
Nhasi, zvese zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kune vese pasirese, Senge North America, South America, Europe, Southeast Asia, Middle East, uye Africa.
Chinangwa chedu ndechekupa vatengi vedu zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nebasa redu rakanaka uye rinokurumidza. Isu takaisa yedu yakatendeka uye yakazara QC system, inosanganisira mbishi kutenga zvinhu, kugadzira, kuongorora, uye kutumira package.
Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu, ndapota taura nesu kuti uwane ruzivo rwemangwana. Kubvunza kwako kuchakosheswa nesu .Tinokuvimbisa iwe nekukurumidza kupindura uye nemakwikwi mitengo.
Mubvunzo: Kubhadhara sei?
1.Tiudze iyo chaiyo chiyero uye huwandu hwaunoraira.Tinoita gwaro rako.
2.Kana zvinhu zvese zvakanaka, tinokuitira PI. Ipapo ndokumbira ubhadhare iyo 30% yeiyo yakazara huwandu kuaccount yedu.
(isu tinogamuchira T / T, Western Union, L / C, nezvimwewo)
3. Mushure mekunge tagamuchira iyo 30% yekubhadhara, isu tinogadzira izvo zvinhu iwe.
4.Kana tapedza zvigadzirwa, isu tinokutumira iwe iwo mafoto kuti utarise uye usimbise.
5.Kana zvese zvakanaka, tinotumira nhumbi uye tinokupa kopi yeB / L.
6. Mushure mekunge tagamuchira chiyero chemari, tinokutumira B / L kwauri, unogona kutora yako nhumbi.
Mubvunzo: Ndinobhadhara mari kwauri, yakachengeteka here?
Tiri nyanzvi yekunze yekutengeserana kambani. Isu tinotora chikamu muCanton Fair gore rega. Mukurumbira hupenyu hwedu. Kubhadhara kwako kuri 100% kwakachengeteka.
Mubvunzo: Chii chinonzi DTEX?
A: kuyerwa kwemachira pamamita zviuru gumi chimwe nechimwe
Mubvunzo: Huswa hwekuisira hune hupenyu hwakaganhurirwa here?
A: Iine hupenyu hwakareba hunotora makore 8-10. Huswa hwekugadzira chigadzirwa chakagadzirwa chakaburitswa kunze. Iine anti-UV mashandiro huswa hunovimbisa vashandisi kusvika pamakore masere negumi ehupenyu hurefu. Iko kuvandudza kwekugadzira tambo dzehuswa hwekugadzira kuri kutora nhanho hombe kuenda kumberi, nekudaro ichipa kukurira kukuru kupfeka uye kubatika kwematavi. Saka zvakakosha kusarudza hukuru hwemhando yepamusoro kana uchitenga.
Mubvunzo: Mvura inodurura inoputira huswa hwekugadzira here?
A: Hongu. Muchokwadi, huswa hwakanyatsogadzirirwa maburi ekudhirowa akaiswa zvakaenzana mukati meiyo turu kuona kuti mvura inokasira nekukurumidza uye nemazvo uye haina dziva pamusoro.